Ndị ntanetị Intanet - CB Echefuru Nbanye
CB echefuru nbanye
Echefuola Aha njirimara gị ma ọ bụ Paswọdu gị?
Ncheta dị mkpa maka
Aha njirimara echefu
Ọ bụrụ na ị aha njirimara gi n'iyi, tinye Adreesị E-mail gị, wee pịa bọtịnụ Aha njirimara, a ga-ezitere aha njirimara gị na adreesị ozi-e gị.
Ọ bụrụ na ị chefuru aha njirimara gị na paswọọdụ gị, biko weghachi aha njirimara mbụ, mgbe ahụ paswọọdụ. Iji weghachite aha njirimara gị, biko tinye adreesị E-mail gị, na-ahapụ ebe aha njirimara efu, wee pịa bọtịnụ aha njirimara, a ga-ezitere aha njirimara gị na adreesị ozi-e gị. Site n'ebe ahụ i nwere ike iji otu ụdị a weghachite paswọọdụ gị.
Ọ bụrụ na ị furu efu paswọọdụ gị ma mara aha njirimara gị, biko tinye aha njirimara gị na Adreesị ozi-e gị, pịa bọtịnụ Paswọdu izipu, ị ga-enwetakwa paswọọdụ ọhụrụ n'oge na-adịghị anya. Jiri paswọọdụ ọhụrụ a iji nweta saịtị.